Doodda Dhaqaale ee Waddammada EU - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doodda Dhaqaale ee Waddammada EU
La daabacay onsdag 2 maj 2012 kl 15.52
Anders Borg, wasiirka dhaqaalaha.Sawirle: Bertil Ericson/Scanpix.
Kulan hor-seedi doona wada-hadallo ad-adag ayaa la filayaa iney yeelan doonaan wasiirrada dhaqaalaha ee waddammada ku midoobay ururka Midowga Yurub, kolka ey maanta kulmi doonaan sidii ey uga wada xaajoon lahaayeen kor u qaadidda shuruudda la damacsan yahay in lagu soo rogo bangiyada iney kor u qaadaan naqshadda ra'sumaalkooda. Iyadoona goolka laga leeyahay uu yahay sidii ey xasilin ugu noqon lahaayeen xaaladda dhaqaale. Kaalinta adag ee dalkani ka taagan yahay middaa ayaa la filayaa inay hor-seeddo wada-hadal adadag ee la isku mari waayo.
Waddammada Yurub iyo qaasatan dalka Isbaaniya ayaa laga welwelsan yahay saameeynta ey dhaqaalaha bulshada ku yeelan karaan bangiyada uu dhaqaalahoodu liito. Halka dhanka kale ey waddammada ku midoobey Eu-da isku dayayaan sidii ey u adkeeyn lahaayeen xaaladda dhaqaale ee looga kaabanayo ama looga hor-tegayo haddii uu dhaqaale cakiran mar kale la soo gudboonaado. Iyadoo middaa lagu gaarayo bangiyada oo lagu khasbo iney yeeshaan keyd lacag ee dheeriya.
Guddiga sare ee maamulka Eu-da ayaa soo jeediyay in 8 000 ee bangi ee waddammadaa ka howl-gala ey khasnaddooda ku jirto ugu yaraan 7% dhaqaalaha uu bangigu deeynta u bixiyo. Halka uu baarlamanka dalkan Iswiidhen qabaan in ugu dambeeyn sannadka 2015 dhaqaalahaa la gaarsiiyo 12%.